Myanmar I-Film Fest... (မြန်မာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်): Thai Horror Movies (ထိုင်းသရဲကားများ)
Thai Horror Movies (ထိုင်းသရဲကားများ)
အင်္ဂလိပ်စာတမ်းထိုးပါတဲ့ ထိုင်းသရဲဇာတ်ကားတွေကို သူငယ်ချင်းတချို့ကတောင်းတဲ့အတွက် ရှာပြီးတင်ထားပေးပါတယ်။ တချို့ကားတွေက တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတွက် ကြောက်တတ်တဲ့သူတွေ၊ နှလုံးရောဂါရှိသူတွေနဲ့ ကလေးတွေ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီသရဲကားတွေကို မကြည့်ဖို့ မေတာ ရပ်ခံပါတယ်။ သရဲကား မကြည့်သင့်တဲ့ ဘဘောခ့်သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တခြား ဇာတ်ကားကောင်းတွေ တင်ထားပေးပါတယ်။
We have collected some Thai horrow Movies with English Subtitles for our friends who have requested. But we kindly urge under 16 and those who can be disturbed easily not to watch these movies. Please enjoy other good movies of other genres that we have collected.
(2) Goast Game
(3) Dark Water
(5) Art of the Devil